Ejipta: Mifanandrina Ny Mpirahalahy Miozolomana Sy Ny Filankevitra Faratampon’ny Tafika – Miala Ve Ny Saro-tava? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Avrily 2012 19:31 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Français, বাংলা, Swahili, Español, English
“Lehilahy anapitrisany no nidina an-dàlambe hanao fitakiana ny hialan'ny governemanta Ganzouri” hoy ny fivakin'ny ao amin'ny gazety ofisialin'ny Freedom and Justice Party na ny Antokon'ny Fahafahana sy ny Rariny (FJP, Ao anatin'ny [Antoko] Mpirahalahy Miozolomana) taorian'ny hetsika nandrirariràna ny vahoaka Ejipsiana. “Fa ahoana no nanombohany?” izany no fanontanian’ny rehetra. Fa naninona no “ratsy fahatapahana” ilay fifandraisana akaiky dia akaiky teo amin'ny Filankevitra Faratampon'ny Tafika na ny (SCAF) sy ny antoko manakaiky ny hahazo ny maro an'isa ?
Nipongatra avokoa ity fiampangàna rehetra ity rehefa namoaka fanambarana toy izao ny FJP:
Ireo antony nomen'ny "Freedom and Justice Party" na ny Antokon'ny Fahafahana sy ny Rariny mba hanoherana ny governemanta ankehitriny.
Ny antony tsy anoavanay ny governemantan'i Ganzouri dia
- Hampitombo ny ahiahy mikasika ny fahadiovan'ny fifidianana sy ny fitsapa-kevi-bahoaka momba ny lalàm-panorenana ny fitazonana ny governemanta
– Te hanakana ny revolisiona, handiso fanantenana ny vahoaka, ka hangala-bato amin'ny fifidianana ve ny SCAF?
– Nandrahona ny handrava ny parlemanta ny SCAF amin'ny alàlan'ny fanoherana ny Filohan'ny Fitsarana Tampony Araka Ny Lalàm-panorenenana.
– Ny fikirizan'ny SCAF hiazona governemanta tsy nahomby dia midika finiavana hanakana ny revolisiona, handiso fanantenana ny vahoaka, ary hangala-bato amin'ny fifidianana
Ny valinteny nataon'ny SCAF ihany koa dia tena nihantsy ady tokoa tahaka ny fanambarana nataon'ny Mpirahalahy Miozolomana ihany koa, , mampahatsiahy ny fihetsiketsehana tamin'ny1954 rehefa nahazo tsiny, noraràna, naiditra am-ponja, ary nampijalian'ny fanjakana ny Mpirahalahy Miozolomana. Nanambara ny SCAF fa ny filazàna hangalabato dia tena fanompana. Nampiasa feom-pandrahonana ihany koa izy ireo rehefa niangavy ny “hery politika sasantsasany” hanatsoaka lesona tamin'ny lasa. Mampanontany tena ny olona koa izay zavatra hitranga amin'ity fifanadrinana eo amin'ny olona eo amin'ny fitondrana sy ireo an-dalan'ny hahazo ny fitondrana ity. Hiditra amin'ny fifandonana ve sa hilalao politika tahaka ny fanao any Ejipta amin'izao fotoana izao?
Ary niaraka tamin'izay, nanandrana ny hampiakatra ny teti-panorony ny Mpirahalahy Miozolomana, ka nilaza fa hanendry an'i Khairat Al Shater, mpitari-dalana lefitra teo aloha avy ao amin'ny Mpirahalahy Miozolomana sy mpandaraharaha mpanapitrisa ho Filoham-pirenena any Ejipta. Nanohina ny maro ny fanapahn-kevitra, na dia ny tao amin'ny Mpirahalahy Miozolomana sy ny Antokon'ny Fahafahana sy ny Rariny. Olona maro no nahita fa hadisoana ny fisafidianana azy, ary misy mihitsy no milaza fa izay no mariky ny “fanombohan'ny farany”. Ny sasany indray mametraka ny Mpirahalahy Miozolomana ho NDP vaovao, ka ny fahefana sy ny vola no singa mibahan-toerana entina mifehy.
Manana iraka hanadihady sy hanome ny heviny sy ny fomba fijeriny izany safidy hafahafa izany ny mpisera fampitam-baovao sosialy:
I Khaled El Baramawy dia nampitaha an'i Shater amin'ny Aboul Fotouh (Mpikambana voalohany iray izay voaroaka taorian'ny filazàny fa hirotsaka ho Filoha) ary nisiokantsera taminà fanesoana:
Indray andro, dia nisy olona nanendry ny tenany hitondra ary nesorina, avy eo ilay olona izay nanala azy … no nanendry ny tenany hitondra
Nibitsika i Taqadum El Khatib :
Ny Mpirahalahy Miozolomana ve … mpandainga mpandainga mpandainga mpandainga mpandainga. Ho an'ny tanoran'ny Mpirahalahy Miozolomana: mialà ary ilaozy ny mpitondra mandainga
I Wael Eskaner dia manana fomba fijery voalanjalanja kokoa:
@weskandar: Raha kandidàn'ny marimaritra iraisana i Al-Shater dia #Ikhwan ny an'ny SCAF. Zavatra tsy eritreretina hitranga mihitsy izany.
Nisiokantsera i Ahmed Aggour:
@Psypherize: Ireo nampahoriana indray no lasa mpampahory. #Ikhwan
I Hassan El Shater,iray amin'ny zanaka miisa 10-n'i Khairat El Shater, dia tsy faly loatra tamin'ny fanendrena ny rainy tamin'ny nisiatsiahany hoe:
@Hassan_elShater : Indrisy nihazakazaka ho filoha i dada! :s
Tsy misy olona mahafantatra marina hoe hanao ahoana ny fiafaran'ny lalao ara-politika ao Ejipta, fa zavatra iray zo antoka, dia izao : vavolombelon'ny fotoana nafanavay ny Ejipsiana ary izy ireo ihany no hamaritra ny tantarany.